Bazimisele ngokulungisa isimo - Ilanga News
Home Izindaba Bazimisele ngokulungisa isimo
Bazimisele ngokulungisa isimo
UMnu Nhlakanipho Ntombela we-ANC uthi kumele bazinuke amakhwapha ngokwehla kwabavotile
UBONA kumele bazinuke amakhwapha ngokungenzi kahle okhe-thweni lohulumeni basekhaya obelungoMsombuluko, uMnu Nhlakanipho Ntombela (osesithombeni), okhulumela i-ANC KwaZulu-Natal, njengoba ethi ukuba mathintanyawo kwabantu abaningi ukuphuma bayovota, kusho ukuthi kumele bazihlole ukuze balungise isimo sangaphakathi kuleli qembu.
Uthe abalandeli babo abangavotanga, akusho ukuthi sebelilahlile iqembu, kodwa kusho ukuthi kumele balungise. UMnu Ntombela utshele abezindaba izolo ngoLwesithathu ukuthi
bakwenze futhi bazimisele ngokulungisa lapho bengenzanga khona kahle. Izibalo ebezingakaphothu-lwa ziveze ukuthi leli qembu liphucwe inqwaba yamawadi ebeliwaqhoqhobele njengoba amanye ewele kwiDA, i-IFP ngisho neNFP imbala.
Ngakolunye uhlangothi, ugqamcishi (load shedding) kagesi uphazamise ukubalwa kwamavoti kwezinye izindawo KwaZulu-Natal, okuholele ekutheni kuthathe isikhathi ukuphothulwa kokubalwa kwawo.
Isikhulu esibambile se-IEC KwaZulu-Natal, uNkz Ntombifuthi Masinga, siveze ukuthi uma konke kuqhubeka ngohlelo, lingashona elanamhlanje ngoLwesine seyitholakele imiphumela egcwele. Kulolu khetho kukhalwe ngokuncipha kwesibalo sabantu abavotile.
Kubalulwe izizathu ezahlukene phakathi kwazo okuwukuthi lwe-nzeke ngoMsombuluko – obekusho impelasonto ende – kusanda kuphela inyanga nezinkinga zangaphakathi emaqenjini ezepolitiki.
Ekhuluma esigcawini sabezindaba eThekwini uNkz Masinga, uthe ugqamcishi kagesi ngesikhathi kusaqhutshwa ukubala amavoti ngoLwesibili kusihlwa, ubaphoqe ukuba batshele ezinye izisebenzi zabo ukuba ziyogoba amadlangala ukuze ziqhubeke izolo nokubala.
Uthe kwezinye izindawo kuphoqeleke ukuba basuke lapho bekuvotelwa khona, kuyiwe ezindaweni lapho bekunogesi khona ukuze ukubala kuqhubeke ngendlela.
Amazwi kaMnu Ntombela ananelwe yinkulumo yesekela likanobhalajikelele we-ANC, uNkk Jessie Duarte, othe ukungaphumi ngobuningi kwabantu kulolu khetho kusho ukuthi sekuyisi-khathi sokuba bazinuke amakhwapha ngembangela yokulahlekelwa yisibalo sabantu ababavotelayo.
Uthe nakuba kubakhathaza ukwehla kwesibalo sabavotela leli qembu, kodwa okubajabulisayo nokubakhuthazayo, wukuthi basahamba phambili ngokwesibalo sabantu abavotile. Uthe kuningi okungaba yimbangela yokwehla kwesibalo sabavoti.
Ubalule izinkinga zangaphakathi okumele bazilungise, wudaba lokunikezelwa kwengqalasizinda ezindaweni ezahlukene, nosuku lokhetho, obekuwuMsombuluko.
Ngakolunye uhlangothi, uMnu Zwakele Mncwango weDA, uxwayise abantu ngokusheshe bajabule njengoba ukubalwa kwamavoti bekungakaphothulwa.
Lo mholi uthe ukunqoba amawadi amaningi kweqembu, akusho ukuthi lizophatha umasipala ngoba kusenezihlalo zamakhansela amele amaqembu (PR), okuyizona ezisazobalwa ngaphambi kokuthi izinto zicace. Bheka nasekhasini 24.
Previous articleUsizi luzwa olunye kwiBucs
Next articleUgwazwe wabulawa esikhungweni sokuvota